Akụkọ - Ga-abụ mgbanwe nje virus
Novel Corona ekpesala ọrịa na England, South Africa na Nigeria kemgbe ọnwa Disemba. Ọtụtụ mba gburugburu ụwa zara ngwa ngwa, gụnyere ịkwụsị ụgbọ elu si UK na South Africa, ebe Japan kwupụtara na ọ ga-akwụsị nnabata ndị mbịambịa bido ụbọchị Mọnde.
Dabere na ọnụọgụ nke Mahadum Johns Hopkins wepụtara na US, ọnụọgụ nke ikpe COVID-19 karịrị nde 80 na ọnụọgụ ndị nwụrụ karịrị nde 1.75 dịka mbido ụbọchị ụka Beijing.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na akwụkwọ akụkọ Corona virus gbanwere, dị ka nje RNA nke ọ nwere si agbanwe ngwa ngwa. Novel Corona virus na-akwụsi ike karịa nje virus ndị ọzọ RNA dịka nje virus. Novel Corona virus na-agbanwe oke nwayọ karịa nje influenza, dị ka onye isi sayensị WHO bụ Sumiya Swaminathan si kwuo.
Mgbanwe nje virus Novel Corona adịlarịrị na-akọ. Dịka ọmụmaatụ, n'ọnwa Febụwarị, ndị nchọpụta chọpụtara ụdị nje virus Corona na-akpata mmụba D614G nke na-ekesa na Europe na America. Studiesfọdụ ọmụmụ achọpụtala na nje na D614G mutation bụ ihe na-agbanwe agbanwe.
N'agbanyeghị ọtụtụ mmụba mkpụrụ ndụ ihe nketa na nje ahụ kemgbe mmalite nke ntiwapụ COVID-19, ọ dịghị nke mgbanwe a maara, gụnyere nke dị na UK, nwere mmetụta dị ukwuu na ọgwụ, ọgwụgwọ, ule ma ọ bụ ọgwụ mgbochi, onye ọkachamara WHO kwuru na Wednesday.
Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ kaadị nnwale COVID-19.